Mhedzisiro yekuchengetedzeka Kwekubhadhara Solutions paKutenga Pamhepo | Martech Zone
Kana zvasvika pakutenga pamhepo, maitiro eashopper anouya chaizvo kune zvimwe zvinhu zvakakosha.
chido - kungave kana kwete iye mushandisi anoda kana kuda icho chinhu chiri kutengeswa online.
mutengo - kuti kana mutengo wechinhu wacho wakundwa nechishuwo icho.
chigadzirwa - kungave kana kuti kwete chigadzirwa chakashambadzwa, pamwe nekuwongororwazve kunobatsira muchisarudzo.
chivimbo - kungave kana kwete mutengesi wauri kutenga kubva kwaari anogona kuvimbwa… kubva pakubhadhara, kusvika pakuendesa, kudzoka, nezvimwe.
Kutya kwekutenga pamhepo kwakakundwa mumakore mashoma apfuura, kunyangwe kubva kunhare mbozha. Nekudaro, iyo yepakati ngoro yekusiya mwero ndeye 68.63%, ichipa yakawanda yakawanda mukana kune ecommerce vatengesi kukwidziridza uye kugadzirisa kwavo online ruzivo. Wepakati UK shopper akashandisa avhareji ye £ 1247.12 (inodarika $ 1,550 US) muna 2015 uye huwandu ihwohwo huri kuramba huchiwedzera!
Ehe, havazi vese mushanyi anoisa chigadzirwa mungoro anofanirwa kufungidzirwa kuve mutengi. Ini ndinowanzo buda kuenda kunzvimbo yekutenga kunowedzera runyorwa rwezvinhu kuti ndingoona kuti zviyero zvese nemitero nekutakura zvichave… ndobva ndadzoka kana bhajeti iriko ndotenga chaiko. Asi mukati medanho rekusiiwa, vazhinji vakasiya chete nekuti havana kuwana saiti yakavimbika.
Vatengi vanoda yakachengeteka, inokurumidza uye yakapusa nzira yekubhadhara, sezvakatsanangurwa mune yeanamwari infographic pazasi. Dzivisa kunetseka nezvekuchengetedzwa kwekubhadhara uye kutarisa kwenguva refu uye kunokanganisa, uye pakupedzisira sarudza yakasimba yekubhadhara gedhi kune rako repamhepo bhizinesi iro richabatsira mhedzisiro kune vanofara vatengi! Tarisa uone Yese Kugadziriswa infographic pazasi, Saga yeInternet Shopper: Mukutsvaga Yakachengeteka Kubhadhara Solution.
Pamudzi wawo ndeyako kubhadhara kubhadhara. Kana mutengi akatanga kutarisa pane saiti nyowani uye akasanzwa seyakavimbika kana kuomarara, ivo havasi kuzoisa panjodzi yekupinda yavo kadhi rechikwereti ruzivo. Muchokwadi, kunetsekana nezvekuchengetedzwa kwemubhadharo kunoguma ne15% yekusiya ngoro yekutenga pane ecommerce saiti. Vanozosiya uye vowana chigadzirwa pane imwe saiti. Saiti yemukwikwidzi wako inogona kutodhura… asi kana vakanyanya kugadzikana, havane hanya nekubhadhara madhora mashoma ekuwedzera.
Yese Kugadziriswa kunongedzera mana akakosha maficha anoita yakasimba yekubhadhara gedhi
Suo rekubhadhara rinopa vatengi hupamhi runyorwa rweasarudzo dzekubhadhara.
Suo rekubhadhara rinopa mutengesi ne rondedzero yekutengesa inosimudzira maturusi kuwedzera zvipiriso.
Suo rekubhadhara rine simba manejimendi manejimendi uye kubiridzira kudzikisira senheyo yeplatform yayo.
Suo rekubhadhara rinoenderera mberi kusunungura zvipiriso zvitsva izvo zvinofambidzana nekuchinja online kutengesa.
Tags: kusiya huwanduavhareji anoshandiswa onlineconversion ratecoupon kodhiecommerceecommerce nhambakuratidza kutumirakubiridzirashanduko yepasi rose mitengoonline shoppingkubhadhara marikubhadhara kubhadharakutarisira ngozimungoro yekutengerakusiya ngoro yekutengesakushandisa onlinekugadzirisa kweseukUnited Kingdom